Iindaba zeNtengiso yeStock | Ezezimali (Ekhasi 3)
Lo msebenzi mtsha wentengiso yemasheya uvelise uthotho lwamaxabiso anamaxabiso anomtsalane kwaye anokwamkela kakhulu ukwenza eyona nto ibalaseleyo kule meko kukuba uya kuba nakho ukuthenga izabelo zoSuku ngamaxabiso aphantsi kakhulu ukusukela ngoku
Ngaba imarike yemasheya yaseMelika ilindele ukwehla?
Emva kweenyanga ezininzi kunye nokuphakama okuye kwaphazamiseka, imarike yemasheya yaseMelika inika imiqondiso yokuqala yokuba le meko ikwazile.Okunye ukuvela kotshintsho kwindlela, ukuya kuthambekeko olusezantsi, kwizabelo ziya kuba yimpembelelo yayo kwistokhwe indices zemarike ngaxeshanye kwelinye icala leAtlantic
Zithini iimveliso ezinesalathiso?
Xa uthetha ngecandelo lotyalo-mali, enye yezona mveliso zaziwayo ezikhoyo zibizwa ngokuba ziimveliso zesalathiso. Zezinye zezona zilungileyo Enye yezinto ekuthiwa zii-indexed products kukuba zivulela iimodeli ezingakumbi nangakumbi kutyalo-mali.
U-Endesa no-Iberdrola kwimeko yokuthenga
Elinye lawona macandelo eentengiso ezithengisayo kwezi veki zidlulileyo kukuba, bothuswa kakhulu ngabatyali mali abaninzi, umbane kunye nelinye lawona matyala achaphazelekayo kule meko inyukayo kwelinye lawona macandelo afanelekileyo kwizabelo zamashishini kuzwelonke yi-Endesa
Izicwangciso ezili-6 zokuwuvala kakuhle unyaka
Kusekho ithemba lokuphelisa ubudlelane bethu neemarike zezemali kulo nyaka unzima obukwindawo yentengiso yamasheya Kusekho ithemba lokuba bungabuphelisa ubudlelane bethu neemarike zezimali ukuba kusetyenziswa iindlela ezithile zotyalo-mali.
Iindlela zentengiso yemasheya kunye nendlela yokuthengisa
Esinye sezitshixo sokwenza ngempumelelo ukonga imali kuxhomekeke ekwazini ukutolika iintsingiselo kunye nokusebenza kuzo ngokuchanekileyo. Awunakho Esinye sezitshixo sokwenza ukonga ngempumelelo okuyinzuzo ekwazini indlela yokutolika umkhwa kunye nokusebenza kuwo ngokuchanekileyo
I-SWAP sisichazi sekhontrakthi esisaziwa kancinci ziiarhente ezithile kwilizwe lemali. Ngokukodwa, ibhekisa kwisivumelwano se-SWAP, sisivumelwano semali phakathi kwamaqela amabini avumayo ukutshintshiselana nokuhamba kwemali ngokwefomula esekwe kwangaphambili.
Ngo-Okthobha inyanga emnyama kwimarike yaseSpain
U-Okthobha uphinde waba yinyanga emnyama yeemarike zokulingana eSpain. Emva kokufikelela kubuncinci bonyaka ukusukela ngo-Okthobha kwakhona, u-Okthobha uphinde waba yinyanga emnyama yeemarike zezabelo eSpain, emva kokufikelela kubuncinci bonyaka
5 izitshixo kwimarike yemasheya eza kuxhomekeka ngo-2019
Ukunyuka okunokubakho kwiimarike zamasheya zamazwe aphesheya kuya kusondela kakhulu kumanani aphindwe kabini ukuba amanqanaba okukhula aboniswe ziimarike ayahlonitshwa.Lonyaka kuyakubakho uthotho lwezitshixo zokumisela ukuba zeziphi iindlela eziza kuthathwa ziimarike zestokhwe ngonyaka izakuba nzima kakhulu
IBrazil ilungile kwiimarike zamasheya zamanye amazwe
Phantse ngokuqinisekileyo babekho abatyali mali abaninzi abacinga ukuba lo Okthobha omnyama unokuphela nokuba mandundu kwiimarike zezemali. I-Bovespa sisalathiso esiphambili sezabelo ze-equities eBrazil kwaye yenye yeebhentshi zabasebenzisi beLatino
Thengisa okanye ulinde kwimarike yemasheya?
Kwimisebenzi yentengiso yesitokhwe, akuyomfuneko ukubala izibonelelo ezinokuziswa yimisebenzi. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kubaluleke kakhulu Okwangoku apho iinzuzo ezinkulu ziqala ukuvela kutyalo-mali olwenziwe, kuyinto eqhelekileyo ukuba uzibuze ukuba ingaba yimeko elungileyo na yokuthengisa
Luluphi olona ncedo lokwenyani lweenzuzo ezinkulu?
Kwimisebenzi yentengiso yesitokhwe, akuyomfuneko ukubala izibonelelo ezinokuziswa yimisebenzi. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kubalulekile ukubala inzuzo eyinkunzi kwimarike yemasheya ngumahluko olungileyo phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengiswa kwezabelo kwaye kuxhomekeke kwinkcitho yokusebenza.
Kufuneka wenze ntoni xa imarike yemasheya iyehla?
Ewe kunjalo, lo nyaka awukho mhle kakhulu kwiimarike zesitokhwe, kungasathethwa ke ngale veki izakuphela. Ukwehla kwiimarike Ewe kunjalo kulo nyaka awukho mhle kakhulu kwiimarike zesitokhwe kwaye kungaphantsi kakhulu kule veki ngokuhla okutsha kwiimarike.
Ngaba ikhona into oyaziyo malunga neStoxx Europe Soccer?
Ewe, abatyali-mali abangaphezulu kwesinye baya kubethwa ngokukodwa ligama lesalathiso sesitokhwe esikhethekileyo nesothusayo njengebhola ekhatywayo yaseStoxx yaseYurophu yenye inkcazo yokutyala imali yakho ngesindululo esahlukileyo ukuze intengiso ibe nengeniso.
Yonke imarike yemasheya yengozi ukusukela ngo-1929
Ukuwa kwemarike yemasheya kukuwa okuthe nkqo kweemarike ze-equity ngaphezulu kwexesha elingagqithanga ixesha kwaye ibonakaliswe kukuwa kwentengiso yemasheya kukuwa okuthe nkqo kweemarike zezabelo ngexesha elingelide kakhulu
Ziziphi iimali ezivela kwiimali?
Ewe, iimveliso zezemali yenye yezona mveliso zinobunkunkqele abanokuthi babhalise kuzo ngoku. Akumangalisi ukuba, ewe, iziphumo zezemali yenye yezona mveliso zinobunkunkqele ababhalisi abatyali mali ngalo mzuzu
Ukubeka esweni utyalo-mali: phi?
Ukusukela ngeli hlobo, abatyali mali bakwimeko yokukhetha kuluhlu olubanzi lwamajelo olwazi ukufumanisa imeko yeasethi yabo.Amajelo eendaba onke esizwe anikezela ngolwazi malunga nokubeka esweni ii-equity okanye ezinye iintlobo zotyalo-mali.
Ukwahlulahlula kwimarike yemasheya kuvelisa i-avareji yenzuzo ejikeleze iipesenti ezi-5 kwaye kuyo nayiphi na imeko oko kuthetha ukuba ngumvuzo omiselweyo ngaphakathi kokwahlukileyo. Ngokwahlulwahlulwa kwimarike yemasheya kuvelisa i-avareji yenzuzo ejikeleze i-5% kwaye kuyo nayiphi na imeko oko kuthetha ukuba ngumvuzo omiselweyo ngaphakathi kokungafaniyo
I-DIA yehla ngaphezulu kwama-40% kwimarike yemasheya
Elinye lawona maxabiso achaphazelekayo kwii-equity zesizwe ezinje nge-DIA iwile kwimarike yemasheya kwaye iwele ngaphezulu nje kwe-30%. Ipesenti Elinye lamaxabiso afanelekileyo kwii-equity zesizwe ezifana ne-DIA liwile kwimarike yemasheya kwaye liwile ngaphezulu nje kwe-30%
Uhlahlo-lwabiwo mali luxinzelela imarike yaseSpain
Isivumelwano ekufikelelwe kuso kulungiselelwa uHlahlo-lwabiwo mali lukaRhulumente ngokubanzi samkelwe kakubi ziimarike zezemali kwisivumelwano ekufikelelwe kuso kulungiselelwa uHlahlo-lwabiwo mali lukaRhulumente jikelele samkelwe kakubi ziimali zeemarike.
Izitshixo ezi-6 eziya kuxhomekeka kwimarike yempahla ekupheleni konyaka
Ngexesha leentsuku, isalathiso esikhethiweyo kwimakethi yesitokhwe saseSpain yehle ngamandla, ngelishwa kubatyali mali abaninzi kwaye kukho uthotho lwezitshixo ukuze wazi indlela yokwenza kwiimarike zezemali kwezi nyanga zidlulileyo zonyaka kunye ezintsonkothileyo
I-CEPSA iza kuhamba esidlangalaleni
Enye yeendaba zentengiso yesitokhwe ukuba le ntwasahlobo izakusizisa kukungena kwenkampani yeoyile i-CEPSA kwiimarike zokulingana zikazwelonke. Imalunga nemizekelo iCEPSA enayo ayithembisi kakhulu ngokuxhomekeke kwiinkampani ezenze esi sicwangciso seshishini
Sisicwangciso esivumela abasebenzisi ukuba bafikelele kuluhlu olubanzi lweemodeli zotyalo-mali, kodwa kwimveliso enye yemali. Kunye noluhlu lweemveliso ezigcina iimpawu ezithile, oko kukuthi, zivumela ukwahluka kotyalo-mali.
Ngezi ntsuku enye yezona zinto kugxilwe kuzo kwiimarike zezemali yiBrazil ngenxa yonyulo lukamongameli olwenzekayo Ngezi ntsuku enye yezona zinto kugxilwe kuzo kwiimarike zezemali yiBrazil ngenxa yonyulo lukamongameli.
Izikhombisi ezintlanu zokurhweba kwimarike yemasheya
Ezi zikhombisi zibonakaliswe ngokusisiseko kuba phantse azinakuqinisekisa impumelelo ngokupheleleyo ekusebenzeni, kodwa ubuncinci ziyaqinisekisa ukuba izigqibo.
Ixesha lerhafu edityaniswe kwimarike yemasheya
Kuyaziwa ukuba ixesha ledipozithi ebhankini yimveliso yezemali apho umthengi ehambisa isixa semali kwiziko lento Into abanye abatyali-mali abangayaziyo kukuba iidipozithi zekota zinokudityaniswa kwimarike yemasheya ukuphucula umda wonikezelo.
Izitokhwe zobuchwephesha zothusa abatyali mali
Elinye lamacandelo kwiimarike zezabelo ezinokuthi zibeke abatyali zimali abancinci nabaphakathi kobona bunzima bobuchwephesha. Elinye lamacandelo kwiimarike ze-equity ezinokuthi zibeke abatyali-mali kwingxaki engaphezulu ziitokhwe zetekhnoloji.
Ulufikelela njani utyalo-mali kolu kuwa?
Alithandabuzeki elokuba utyalomali luya kutshintsha ngokubonakalayo njengoko kusiwa. Esinye sezizathu zokuchaza lo mkhwa kungenxa yokuba ukusukela akukho mathandabuzo ukuba utyalomali luya kutshintsha kakhulu ngeli xesha lokuwa kwaye kufuneka siziqonde ezi ntshukumo
Ngaba kufuneka ndingenise ikhontrakthi kwireyithi yentengiso?
Enye yeemveliso ezingaziwayo kwimarike yemasheya ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ngokungathandabuzekiyo yimali ethe tyaba yokurhweba kwimarike yemasheya. Enye yeemveliso ezingaziwayo kwimarike yemasheya ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ngokungathandabuzekiyo yimali ethe tyaba yokurhweba kwimarike yemasheya
Le nyanga izakungena kwimbali yokurhuqa isitokhwe ukuya kwelona xesha lisezantsi kule minyaka idlulileyo. Apho ixabiso lalo belikule nyanga liza kwehla embalini ngokurhuqa izabelo zeTelefonica ezantsi ekuphelelweni lithemba kwabatyali mali bazo
Kusele ikota enye kuphela kude kube kugqitywe unyaka-mali ka-2018 kwaye oko kuye kwaphoxa kwinxalenye enkulu yabatyali mali. Kuzo zonke, ayizukubakho enye indlela yokufumana ukuba yeyiphi imimandla yejografi eya kuthi ibonelele ngembuyekezo ephezulu ekupheleni konyaka,
Ukuba uchitha ixesha elithile kwimarike yemasheya, kuya kufuneka uyazi enye yeempawu ezikunceda kakhulu kutyalo-mali, njenge-BPA. Ewe, ziyahambelana I-EPS sisalathiso esibala icandelo lenzuzo yenkampani esasazwe phakathi kwesabelo ngasinye esenza imali eyinkunzi.
Enye yezona zinto zintle kakhulu ezenzelwe umdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi yenziwa ngogqithiso phakathi kwengxowa mali yenye yezona zinto zithandekayo kwimidla yabatyali zimali abancinci nabaphakathi yenziwa ngogqithiso phakathi kwemali
Elinye lawona maqhinga alungileyo okwenza naluphi na uhlobo lotyalo-mali kukunyanzelisa phantsi kweemeko zokuba bhetyebhetye. Esi sesinye sezona ndlela zintle zokuqhuba naluphi na uhlobo lotyalo-mali kukunyanzelwa phantsi kweemeko zokuba bhetyebhetye
Okubi kakhulu okunokwenzeka kukuba isalathiso sesitokhwe saseSpain sisondele kakhulu kumanqanaba amanqaku angama-9.000. Kodwa inokujongwa isezantsi kwindlela yayo: Ukwenza ukonga kube yinzuzo, kuyakufuneka ukhethe iiasethi ezithile zemali eziza kusebenza ngcono kunenye.
Izabelo zamasheya azifumananga kakuhle ukubuya kweeholide kwicala labatyali mali kwimigangatho yorhwebo. Ukuba akunjalo yonke into Iziganeko zikhokelele ubulungisa belizwe ukuba bafikelele kumanqanaba asezantsi kakhulu kwaye bathengise kubuncinci bokubuyiselwa konyaka
Inyani yokuba unokwenza into ayithethi ukuba uyenze ngoku. Kwaye kungaphantsi kakhulu xa ungcakaza ngemali yakho, njengoko kusenzeka kwinto yokuba unokwenza into ayithethi ukuba uyenze ngoku. Kwaye kungaphantsi kakhulu xa ungcakaza ngemali yakho, njengoko kusenzeka kutyalo-mali
Icandelo lombane lelinye lezona zinto zibalulekileyo kwizabelo zamashishini zaseSpain kwaye ngaphakathi kulo akukho mathandabuzo okuba i-Iberdrola yinkampani ekhethiweyo yecandelo lombane yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwizabelo zamashishini zaseSpain kwaye ngaphakathi kulo akukho mathandabuzo okuba i-Iberdrola yeyona ikhethiweyo inkampani
IiCarbures ziyanda ziye kwelinye icala leAtlantic
IiCarbures, lelinye lawona maxabiso aqikelelweyo ezabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo kuzwelonke, zisematheni kule mihla ngenxa yeendaba ezinokunika umkhombandlela omtsha kuWe Awunakho ukulibala ukuba amaxabiso anje ngeCarbures ayaphambuka kuzo zonke iindawo zokujonga kwaye Naliphi na icebo oza kulisebenzisa
Yila isicwangciso esisisitshixo kwimpumelelo yotyalo-mali
Kukho iintlobo ngeentlobo zeemveliso kwintengiso ezinceda ekuphuhliseni lo msebenzi kwaye ezinye zazo zilungile ngokwenene ukuze ziphumelele.
Ixabiso: isimanga esikhulu xa ubuya eholideyini
Ukubuya kweeholide kunemimangaliso emininzi egcinelwe umdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi kwaye okunokubangela ukuba baguqule ukubuya kwabo kweeholide kunemimangaliso emininzi egcinelwe umdla wabatyali mali abancinci ngokwahluka okubonakalayo kumaxabiso athile.
Icandelo lezokhenketho laseSpain lelona lesithathu linamandla emhlabeni, kuphela emva kwe-United States neFrance. Le yinyani yokuba ungathatha ithuba kuKhenketho lushishino lokuqala kuqoqosho lwaseSpain, kodwa kwangaxeshanye icandelo lichithe kakhulu kwimarike yemasheya ziinkampani ezimbalwa ezimelwe kwimarike eqhubekayo yelizwe lethu.
Iingcamango ezintlanu zokuqalisa kwakhona utyalomali emva kweholide
Ewe, ukubuya eholideyini akuyi kuba lula kakhulu ukuze ukwazi ukusebenzisa izimvo zakho zotyalo mali
Amaxabiso esizwe achaphazeleka kakhulu kwingxaki yaseTurkey
Ehlotyeni kusinike isimanga esibi sokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi bebengenayo. Le ngxaki yezoqoqosho kwinto eyenzekayo eTurkey yinto abatyali zimali abangenayo kwaye ngokuqinisekileyo ibangela ukuba baphulukane nemali eninzi.
Kufuneka uyityale nini imali kwimarike yemasheya?
Ukuthenga nokuthengisa isitokhwe yenye yeendlela ezona zilungileyo zokwenza inzuzo okanye ukutyala imali, nangona ingekho ngaphandle kokuthintela
Nangona ii-IPO zichaphazela iinkampani ezingadweliswanga kwiimarike zezabelo, into esiza kuyenza zezo zidweliswe kwimarike yemasheya
Ingxowa yesichazi-magama sabaqalayo
Ukutyala imali kwimarike yemasheya kufuna ulwazi olusisiseko lokuqhuba imisebenzi ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo. Akunakwenzeka ukuba ndiyazi Enye yezinto eza kwahlula kwabanye abatyali zimali abancinci nabaphakathi kukwazi isichazi magama esibanzi
Inzuzo ka-Endesa ifana kakhulu naleyo yebhondi
I-Endesa lolunye lolona khuseleko lusebenzayo kwiimarike ze-equity kwaye ukuya kwinqanaba lokuba kukho amawaka kunye namawaka ezabelo atshintsha izandla
Ukurhweba kwimarike yemasheya kwi-Intanethi, kodwa ngeziqinisekiso
I-Intanethi ibe sisixhobo esinamandla sokwenza utyalomali. Ukusebenza kwayo kuyakhawuleza kwaye nangaliphi na ixesha losuku, nokuba kungaphezulu kwe-Intanethi, kuye kwaba sisixhobo esinamandla sokwenza utyalo-mali, apho ukusebenza kwayo kukhawuleza kwaye nangaliphi na ixesha losuku.
Ewe, abatyali-mali abanamava ngakumbi kwiimarike zezemali baya kuba neengxaki ezimbalwa zokuhambisa utyalomali lwabo ngokuchanekileyo.Ukuqala ukwenza utyalo-mali kwimarike yemasheya, kubalulekile ukuphuhlisa uthotho lwezitshixo eziza kunceda impumelelo yemisebenzi kwiimarike zezemali.
Ukuba ujonga enye indlela yokulingana, ngokungathandabuzekiyo leyo yenziwe ziimarike ezisakhulayo, ngakumbi kolunye utshintsho
Ewe, eyona njongo iphambili kunye nokuphela abanayo abatyali mali abancinci nabaphakathi kukwenza imali kwimisebenzi yabo kwiimarike zengeniso, Ewe, eyona njongo iphambili kunye nokuphela kwabatyali mali abancinci naphakathi kukwenza imali ekusebenzeni kwabo.
Njengokuba ukusasazeka kwepremiyamu yomngcipheko kuphezulu, kuyakuchaphazela ukwehla kwengeniso esisigxina kuba iimarike zentengiso zinethuba lokuwa kakhulu
Ipremiyamu yomngcipheko yenye yeeparameter ezibaluleke kakhulu ukumisela ukuvela kweemarike zesitokhwe. Akumangalisi ukuba abatyali mali bajonge konke Iprimiyamu yomngcipheko yenye yeeparameter ezibaluleke kakhulu ukumisela ukuvela kweemarike zesitokhwe ngaphezulu kwako konke
Irhafu yeTobin okanye i-ITF luhlobo lwerhafu kwimicimbi yezemali eyacetywayo kumashumi eminyaka eyadlulayo sisazi ngezoqoqosho saseMelika
Okukhona inzuzo enkulu inkulu, kokukhona kulunge ngakumbi kwimidla yakho yobuqu, nokuba leliphi na ixesha otyalomali lwakho olujolise kulo.
Ukuba uza kutyala imali oyigcinileyo kwiimarike ze-equity, awuzukukhetha ngaphandle kokuba wazi amaziko lawo aphawula amandla ezoqoqosho ehlabathi.
Zeziphi iimveliso zemali onokutyala kuzo kwiimali?
Inxalenye elungileyo yotyalo-mali yenziwa kwii-euro kuba yeyona mali iphakathi kwabagcini baseSpain. Nangona kunjalo, ayinakwenzeka kuphela ukutyala imali kwezinye iimali zamanye amazwe ikunika ithuba lokuba utyalomali lwakho luphuculwe ngokwemveliso evelisiweyo.
Ukukhethwa kweencwadi zentengiso yesitokhwe ekubonelela ngezona zimvo zibalaseleyo zokwenza ukuba ukuthengisa kwakho kwistokhwe kunenzuzo ukusukela ngoku kubaluleke kakhulu.
Nabani na oza kutyala imali yakhe kwiimarike ze-equity kufuneka athathele ingqalelo ubuncinci ezinye zezi ndlela kubuchwephesha kunye nohlalutyo olusisiseko olwenziwe kwiinkqubo ezimbini ezahlukileyo kodwa ezi zimbini zinokuncediswa.
Ewe, ukuba ungumtyali mali onamava kwiimarike zezemali, uya kuba uvile ukuba kububulumko ukuthengisa ngaphambi kokuba uye ekhefini.
Ihlobo liyafika kwakhona kwaye ngokuchanekileyo ziinyanga zikaJuni noJulayi apho ulwabiwo lwezahlulo lufikelela kwincopho yalo ephezulu yonyaka
Kuya kufuneka uyazi ukuba i-PER yenye yeeparameter ezisetyenziswa kakhulu ukwazi ukuba ngaba iimarike zezemali ziyabiza okanye azibizi
Yintoni igalelo lemali exubeneyo?
Iimali ezibizwa ngokuba zixubeneyo zinobumbeko obahlukeneyo okoko baqala kwiiasethi ezahlukeneyo zezimali nakwindalo eyahlukileyo
Abarhwebi abakwi-Intanethi abasebenza kwintengiso yesitokhwe
Ewe, abathengisi abakwi-Intanethi zezinye zeendlela onazo okwangoku ukuhambisa imisebenzi kwimarike yemasheya
Ewe, ukuba ungumtyali mali omncinci nophakathi, uyazi ukuba ukonyuka kwemali eyinkunzi yinkqubo enxibelelene ngokusondeleyo neemarike zezabelo
Uya kufumana indices zesitokhwe zazo zonke iintlobo, ezinye zaziwa kakuhle kodwa enye ongasokuze uve ngayo.
Yintoni ibhidi yokuthatha kwakhona?
Njengengxenye elungileyo yabatyalomali eyazi kakuhle, ibhidi yokuthatha kwakhona isicatshulwa sokuba yintoni ibhidi yokuthabatha.
Yintoni onokuyenza malunga nelahleko yentengiso yemasheya?
Abatyalomali abancinci nabaphakathi bakwimeko yokusebenzisa izicwangciso-qhinga ezithile ukunqanda ukuncitshiswa kwenkunzi yentengiso kude kube lelo xesha, Oko kukuthi, ilahleko yenkunzi.
Kulo nyaka nangokuchasene nazo zonke iingxaki, ukungazinzi kubuyele kwiimarike zezemali emva kweminyaka engaphezu kwemithathu ngaphandle kobukho bayo ekusebenzeni.
Icandelo lezemali zininzi iindlela zokwenza imali, kwimarike yemasheya lelinye lawona macandelo angaziwayo, sinokufumana kwimarike yemasheya indlela esebenzayo
Imali ayilali: utyalomali kwimpelaveki
Kwiminyaka yakutshanje, ukhetho lokurhweba ngezixhobo zemali ngeempela-veki luvulekile, nkqu nakwiimarike ezinje.
Iimarike zezemali zenza ukuba kube lula ukuphucula inzuzo ngokusebenzisa enye indlela kodwa enenzuzo kakhulu
Tyala imali kwimarike yemasheya, kodwa kwiidipozithi zekota
Ezi dipozithi zenza isicwangciso esiliqili sokunciphisa umngcipheko kwaye, ngelishwa, fumana imbuyekezo kulondolozo lwakho olungaphezulu kweemveliso zebhanki zesiko.
Iindlela zotyalo-mali: uzisebenzisa njani?
Njengokuba usebenzisa amanye amacebo otyalo-mali, kuyakuhlala kulula kuwe ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ngeyona ndlela ichanekileyo.
Zonke ii-indices zemarike yaseSpain
Kuzo zonke ii-indices zamasheya eSpain, ezo zinokubhekisa kwiinkampani ezincinci kunye nezezimali eziphakathi.
Uyintoni umahluko phakathi kokubuyela umva kunye nokuguqula imeko?
Ewe kwimarike yemasheya, enye yezona mpazamo zinkulu zinokwenziwa ekuhlukaniseni eyona nto ibuyayo kwaye luphi utshintsho kwindlela
Ukungazinzi okukhoyo kwiimarike zase-Itali naseSpain kwezi ntsuku kukohlwaya ngokuqatha ukhuseleko olumelwe ziibhanki
Esinye seziganeko ezimbi kakhulu kwiimarike zezemali sifakwe eSpain xa bekucingelwa kancinci kwaye kukungazinzi kwezopolitiko
Ungazikhusela njani ekungazinzi kweemarike zezemali?
ISpain, i-Itali, uMbindi Mpuma kunye noMntla Korea zezinye zeendawo ezongeza ukungazinzi kwiimarike zezemali
Izinto zokwenza ukutya: enye indlela yotyalo mali
Izinto zokwenza imveliso zidlala indima ebalulekileyo ekhuselekileyo xa kujongwa iimeko ezingathandekiyo kwiimarike zezemali
Guqula icebo lotyalo-mali ngale meko yangoku
Ukuba kukho ukhuseleko olunendawo yokuthenga kwisicwangciso sokuthenga sangoku, ayikho enye ngaphandle kwenkampani yeoyile yesizwe iRepsol.
Iimpawu ezimbi kwiimarike zezemali zifakelwe e-Itali, njengesiphumo sikarhulumente omtsha oza kwenziwa phakathi kwe-5 Star Movement neLa Liga.
I-ACS kunye ne-Nokia, ezona ndawo zimbini zokugcina imali kwi-Ibex 35
Ngayiphi na imeko, zombini i-Nokia Gamesa kunye ne-ACS zikhokele kwisiqingatha sokuqala sale semester inzima kwimarike yemasheya
Ngaba ukomeleza kwedola kunefuthe lini kwimali yakho yobuqu?
Ukuba ufuna ukuthatha ithuba lokunyuka okuphezulu kwedola yaseMelika ngokuchasene ne-euro, olona khetho lwanelisayo kukukhetha ukurhweba
Ukuba kukho intengiso yamazwe aphesheya kwizabelo ezinokuba yinzuzo kulo nyaka, ngokungathandabuzekiyo iRussia enokhetho lokuvelisa inzuzo enkulu
Iimarike zesitokhwe zaseYurophu zizama ukwenza isigqibo se-United States sokushiya isivumelwano seenyukliya ne-Iran kwaye oko kungazinzisa iimarike.
Enye yeenjongo eziphambili ze-fibonaccio kukuseka indawo yokuxhasa kunye nokumelana apho ukwenza urhwebo kwimarike yemasheya.
Ukuwa kwe-euro kuyichaphazela njani imarike yemasheya?
Kulo nyaka, i-euro ingaba yinto efanelekileyo ye-asethi yezemali ekumiseni ukuvela kwe-equities kwiinyanga ezizayo.
Yintoni iBPA kwaye ibaluleke ngantoni?
I-EPS okanye umvuzo kwisabelo ngasinye yenye yeeparameter ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukungena kwiimarike zokulingana
Ukuguquguquka yinto ebalulekileyo kwiimarike zezemali ezinokwenza imali ukuba imeko efunekayo ifezekisiwe kuqoqosho
Ngokuqinisekileyo uvile ngaphezu kwesihlandlo esinye ukuba zeziphi izinto ezivela kwimali. Ngenjongo ephambili yokutyala imali kwezi mveliso ukunyusa ingeniso yeeasethi zakho
Iberdrola iphehlelela ibhidi yokuthabatha inkampani yeBrazil
U-Iberdrola uthathe isigqibo sokumisela ibhidi yokuthabatha umhambisi waseBrazil u-Eletropaulo ngenjongo yokuthenga phakathi kwe-51% kunye ne-100% yezabelo.
Uhlaselo oluhlangeneyo eSyria luyichaphazela imarike yemasheya?
Uhlaselo oluhlangeneyo eSyria lunokwenzakalisa ukuvela kwemarike yemasheya ukuba igcinwa ngokuhamba kwexesha, into engenzeki
Uyifumana njani i-ertyisi?
Iichicharros zidweliswe kukhuseleko oluqheleke kakhulu kwimisebenzi yokuqikelela kunye nokwenza imali ngexesha elifutshane
Arcelor okanye iAcerinox? Yeyiphi eyona khetho ilungileyo
I-Arcelor kunye ne-Acerinox zilandelwa linani elifanelekileyo labatyali mali abancinci nabaphakathi abavavanya indlela amaxabiso ezabelo zabo anokuvela ngayo kulo nyaka
Ukwahlulahlula ngo-Epreli ukulwa nemarike yebhere
UTshazimpuzi yinyanga enomdla kakhulu ekuhlawuleni izabelo kwaye inokutshintsha isicwangciso sakho ngokuqala kwekota yesibini yonyaka.
I-sicav luhlobo lweZiko eliTyalo-mali eliHlanganisiweyo lendalo yeenkampani, eyona njongo yayo ikukukhulisa imali
Iimarike ezihlumayo zisenokuba yeyona ndlela inenzuzo ngoku, ngaba ufuna ukwazi ezinye zezizathu ezibaluleke ngakumbi?
Inkampani yokwakha i-ACS, ngokusebenzisa iHotchief, iqinisekisile isivumelwano "esibophelelayo" sokumilisela umnikelo wokudibanisa u-Abertis.
Utyalomali lwexesha elide: Into ekufuneka uyazi
Ixesha elide sisigxina esifuna isicwangciso-mali esichazwe kakuhle kunye namaxabiso athile.
Zithini iichips zeblue?
Iitshipsi zeblue zizokhuseleko ezibonisa eyona mali ininzi kwizabelo zamashishini ezibonelela ngothotho lweempawu ezichaziweyo
Ukuguquguquka kwexabiso elinye lokutyala imali
Ukuguquguquka yenye yeendlela ezizezinye kutyalo-mali ngamanye amaxesha xa ukuvela kwemarike yemasheya kungathandeki
Uyakha njani ipotifoliyo yengxowa mali yotyalo mali?
Ipotifoliyo yomhlalaphantsi olungelelanisiweyo yenye yeendlela zokupheka ezilungileyo zokugcina ukona kumaxesha anzima
Izitokhwe ezijikelezayo zotyalo-mali kwimarike yemasheya
Amaxabiso emjikelezo kulula ukuwachaza kuba amaxabiso awo axhomekeke kumjikelo wezoqoqosho apho kukhula khona imarike yemasheya
Ngaba imali eqinisekisiweyo yimbono elungileyo yotyalo-mali?
Imali ehlanganyelweyo eqinisekisiweyo ikunika ithuba lokugcina umvuzo oqinisekileyo kunye nonyaka
Ungawugcina njani umkhondo wotyalo-mali lwakho?
Imfuno yokulawula ngokufanelekileyo ukonga kukugcina umkhondo wesitokhwe, amacandelo kunye nezalathiso zesitokhwe kunye nohlaziyo lwabo
Imali mboleko kunye nokuthintela imisebenzi eyoyikekayo kwimarike yemasheya
Iimali-mboleko zotyalo-mali ziyilelwe ukuze abatyali zimali bangabinakho ukwahlukana nezabelo zabo ngexesha elingathandekiyo
Ungaziphepha njani iimpazamo zonyaka odlulileyo?
Elinye lamaqhinga ukuze iimpazamo zingaveli kulo nyaka kukuveza ukuba zeziphi ezakhe zenzeka kunyaka ophelileyo
Yintoni i-PER kwaye isetyenziselwa njani ukusebenza kwintengiso yesitokhwe?
I-PER yenye yeeparameter e